တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	တရုတ်-မြန်မာဆက်ဆံရေးအဓိကအကြောင်းရင်း (၅)ချက်	September 7, 2010
တရုတ်နိုင်ငံသို. (၅)ရက်အလည်ပတ်ခရီးအတွက်ဒီနေ.မောင်သန်းရွှေတို.အုပ်စုရောက်နေပြီဖြစ်သည်၊တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအဓိကအပြန်အလှန်အ ကြောင်း(၅)ချက်ရှိသည်၊(၁)၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင်ဗမာကတရုတ်ပြည်သူ.သမ္မတနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်နိုင်ငံဖြစ်သည်၊ဒါပေမဲ့၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို.မှာဖြစ်ပွားခဲ့ သည့်တရုတ်ဆန်.ကျင်ရေးကြောင့်ဆက်ဆံရေးချို.တဲ့လာခဲ့သည်၊(၂)(၁၉၈၈)ခုနှစ်ဒီမိုကရေအရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲနှိပ်ကွပ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းဗမာပြည်အပေါ်အနောက်နိုင်ငံများပိတ်ဆုံ.မှုကျယ်ပြန်.နေသည့်အချိန်မှာတရုတ် ကမြန်မာအစိုးရအားလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ဘီဂျင်းအစိုးရကအနောက်ဘက်အိမ် နီးချင်းနိုင်ငံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတားဆီးအနေနဲ.သံတမန်ဆက်ဆံရေးကိုလည်အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်၊(၃)လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၈)ဒဿမ ၁၇ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီး(၂ )ဆယ်စုနှစ်အတွင်မြှုပ်နှံခဲ့သောသုံးပုံ တစ်ပုံပမာဏနှင့်ညီမျှသည်၊စွမ်းအင်းစီမံကိန်းရင်းနှီးငွေနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေအားလျှပ်စစ်တွင် ဒေါ်လာ(၅)ဘီလီယံရှိပြီးရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ.တွင် (၂)ဒဿမ (၁၅)ဘီလီယံရှိသည်ဟုဖော် ပြနေသော်ငြားလည်းသုံးသပ်သူများ၏အဆိုအရမြန်မာတွင်တရားဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစာရင်းအတိအကျကိုယုံကြည်ဖို.မလွယ်ဘူးလို.ပြောပါတယ်၊
နှစ်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လေပုံတစ်ပုံထက်မနဲတိုးမြင့်လာပြီး ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၂)ဒဿမ (၆၃)ဘီလီယံရှိတယ်လို. တရုတ်စာရင်းအင်အရသိရှိရပါသည်၊တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသစ်တောလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအကြီးအကျယ်လုပ်ဆောင်နေသည်၊(၄)မြန်မာအစိုးရသည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒယာပင်လယ်ထဲသို.တရုတ်အစိုးရအားဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းသည် ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ.တင်သွင်းခြင်းမှုသက်သက်မ ဟုတ်ဘဲစစ်ရေးအရစခန်းအခြေချမှနှင့်အသံဖမ်းနေရာလည်းအကျုံဝင်သည်၊လွန်ခဲ့သောလတုန်းကဆို မြန်မာပြည်ကိုပထမဦးဆုံးတရုတ်စစ်သဘောင်္ကြီး နှစ်စင်ကမ်းခြေလာကပ်သွားသည်၊(၅)နောက်ပိုင်းတွင်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းချောမောတိုးတက်လာသည်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လတွင် ဗမာစစ်အစိုးရနှင့်(ကိုးကန်.)လက်နက်ကိုင်တော်လှန် သူများတိုက်ပွဲကြောင့်တရုတ်ပြည်သို.ဒုက္ခသည်များထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာကိုဘီဂျင်အစိုးရအားဒေါကန်စေခဲ့သည်၊မြန်မာစစ်အစိုးရကလည်းနယ်စပ် တည်ငြိမ်မှုအတွက်ထိန်းသိမ်းမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်၊
In 2007, China’s Foreign Ministry published an unflattering account of Myanmar’s new jungle capital Naypyitaw, expressing surprise that the poor country would consider such an expensive move without first telling its supposed Chinese friends. (Writing by Ben Blanchard; Editing by Ron Popeski) Share this:PrintEmailFacebookTwitterLike this:Like Loading...